ဆရာမလေး မပုနျးရညျဆိုတဲ့ ကာရိုကျတာအပျေါ ဝဖေနျနတေဲ့သူတှကေို မတ်ေတာရပျခံစကားဆိုလိုကျတဲ့ ခိုငျသငျးကွညျ – Askstyle
ဆရာမလေး မပုနျးရညျဆိုတဲ့ ကာရိုကျတာအပျေါ ဝဖေနျနတေဲ့သူတှကေို မတ်ေတာရပျခံစကားဆိုလိုကျတဲ့ ခိုငျသငျးကွညျ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး အမျိုးသမီးဆယ်လီတွေထဲက တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးခိုင်သင်းကြည်ကိုတော့ ပရိသတ်တွေရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်..။
ဖေဖော်ဝါရီ(၁၃)ရက်နေ့မှာ ပြသတော့မယ့် “ဆူးပန်းခွေသွယ်ဘယက်နှင့် ပေရွက်လိပ်နားတောင်းဆင်” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ သူမပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ကာရိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ပိုစ့်လေးကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်..။ မခိုင်လေးက အသက်(၂၀)ကျော်အရွယ် ဆရာမလေး ပုန်းရည်နေရာကနေ သရုပ်ဆောင်ဖြစ်တာက “ကိုခန့်နဲ့ မခိုင်ကြီးတို့ရဲ့ လုပ်စေချင်တာကြောင့်ရော.. ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီကာရိုက်တာကို သရုပ်ဆောင်ချင်တာကြောင့် သရုပ်ဆောင်ဖြစ်သွားပြီး အရင်စွာတေးလန်ပုံစံမဟုတ်ဘဲ တည်ငြိမ်အေးဆေးတဲ့ ဆရာမလေးအသွင်ဖြစ်အောင် ကြိုးစား လုပ်ဆောင်ထားပါတယ်”လို့ ပြောပြလာပါတယ်..။
မခိုင်လေးကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေမှာ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တာကြောင့် တခြားသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့ အစီအစဉ်တွေမှာလည်း လုပ်ကိုင်နေတာပါ..။ “ဆူးပန်းခွေသွယ်ဘယက်နှင့် ပေရွက်လိပ်နားတောင်းဆင်” ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ကူးစဉ်က မရိုက်ကူးခင် ရိုက်ရက်တွေရွေ့သွားခဲ့ပြီး တခြား အလုပ်လေးတွေနဲ့ တိုက်ကုန်တာကြောင့် သူမဘက်က ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခဲ့ပြီး သူမကျန်းမာရေးကြောင့် ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားတွေ မရိုက်ရဘဲ နားလိုက်ရတာမျိုးတွေ မဖြစ်စေချင်လို့ ဆက်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်..။ ကျန်းမာရေးထိခိုက်နေတဲ့ကြားက ရိုက်ထားတာကြောင့် ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ချို့မှာ မျက်နှာလေးချောင်ကျနေတဲ့ ပုံလေးတွေကိုလည်း သည်းခံပြီး ကြည့်ပေးကြပါလို့လည်း မေတ္တာရပ်ခံပြောလာခဲ့ပါတယ်..။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ရုပ်ရှင်တစ်ဖွဲ့သားလုံးနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ကူးစဉ် ကြုံခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို တစ်ယောက်တည်း ဒိုင်ခံဖြေရှင်းပေးခဲ့တဲ့ ကိုခန့်စည်သူကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်..။ မခိုင်လေးကတော့ ကိုယ်တိုင်က ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ပေမယ့် သူမကြောင့် တခြားသော ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားတွေ အခက်အခဲမဖြစ်စေချင်တဲ့ စိတ်လေးကတော့ တကယ်ကို လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်နော် ပရိသတ်ကြီးရေ..။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးရော ခိုင်သင်းကြည်ပါဝင်ထားတဲ့ MRTV-4 ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၃)ရက်နေ့ ည(၇)နာရီမှာ ပြသတော့မယ့် “ဆူးပန်းခွေသွယ်ဘယက်နှင့် ပေရွက်လိပ်နားတောင်းဆင်” ဇာတ်လမ်းတွဲကြီးကို အားပေးကြည့်ရှု့ဖို့အသင့်ပဲလား????
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ နာမညျကွီး အမြိုးသမီးဆယျလီတှထေဲက တဈယောကျအပါအဝငျဖွဈတဲ့ မငျးသမီးခိုငျသငျးကွညျကိုတော့ ပရိသတျတှရေငျးနှီးပွီးသားဖွဈမှာပါနျော..။
ဖဖေျောဝါရီ(၁၃)ရကျနမှေ့ာ ပွသတော့မယျ့ “ဆူးပနျးခှသှေယျဘယကျနှငျ့ ပရှေကျလိပျနားတောငျးဆငျ” ဇာတျလမျးတှဲမှာ သူမပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ ကာရိုကျတာနဲ့ ပတျသကျတဲ့ပိုဈ့လေးကို သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ..။ မခိုငျလေးက အသကျ(၂၀)ကြျောအရှယျ ဆရာမလေး ပုနျးရညျနရောကနေ သရုပျဆောငျဖွဈတာက “ကိုခနျ့နဲ့ မခိုငျကွီးတို့ရဲ့ လုပျစခေငျြတာကွောငျ့ရော.. ကိုယျတိုငျလညျး ဒီကာရိုကျတာကို သရုပျဆောငျခငျြတာကွောငျ့ သရုပျဆောငျဖွဈသှားပွီး အရငျစှာတေးလနျပုံစံမဟုတျဘဲ တညျငွိမျအေးဆေးတဲ့ ဆရာမလေးအသှငျဖွဈအောငျ ကွိုးစား လုပျဆောငျထားပါတယျ”လို့ ပွောပွလာပါတယျ..။
မခိုငျလေးကတော့ အနုပညာအလုပျတှမှော ဝါရငျ့သရုပျဆောငျမငျးသမီးတဈလကျဖွဈတာကွောငျ့ တခွားသော ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှနေဲ့ အစီအစဉျတှမှောလညျး လုပျကိုငျနတောပါ..။ “ဆူးပနျးခှသှေယျဘယကျနှငျ့ ပရှေကျလိပျနားတောငျးဆငျ” ဇာတျလမျးတှဲရိုကျကူးစဉျက မရိုကျကူးခငျ ရိုကျရကျတှရှေသှေ့ားခဲ့ပွီး တခွား အလုပျလေးတှနေဲ့ တိုကျကုနျတာကွောငျ့ သူမဘကျက ကနျြးမာရေးထိခိုကျခဲ့ပွီး သူမကနျြးမာရေးကွောငျ့ ရုပျရှငျအဖှဲ့သားတှေ မရိုကျရဘဲ နားလိုကျရတာမြိုးတှေ မဖွဈစခေငျြလို့ ဆကျရိုကျခဲ့ပါတယျ..။ ကနျြးမာရေးထိခိုကျနတေဲ့ကွားက ရိုကျထားတာကွောငျ့ ဇာတျဝငျခနျးတဈခြို့မှာ မကျြနှာလေးခြောငျကနြတေဲ့ ပုံလေးတှကေိုလညျး သညျးခံပွီး ကွညျ့ပေးကွပါလို့လညျး မတ်ေတာရပျခံပွောလာခဲ့ပါတယျ..။
နောကျဆုံးမှာတော့ ရုပျရှငျတဈဖှဲ့သားလုံးနဲ့ ဇာတျလမျးတှဲရိုကျကူးစဉျ ကွုံခဲ့ရတဲ့ အခကျအခဲတှကေို တဈယောကျတညျး ဒိုငျခံဖွရှေငျးပေးခဲ့တဲ့ ကိုခနျ့စညျသူကိုလညျး ကြေးဇူးတငျကွောငျးကို ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ..။ မခိုငျလေးကတော့ ကိုယျတိုငျက ဝါရငျ့သရုပျဆောငျဖွဈပမေယျ့ သူမကွောငျ့ တခွားသော ရုပျရှငျအဖှဲ့သားတှေ အခကျအခဲမဖွဈစခေငျြတဲ့ စိတျလေးကတော့ တကယျကို လေးစားဖို့ကောငျးပါတယျနျော ပရိသတျကွီးရေ..။ Cele Connections ပရိသတျကွီးရော ခိုငျသငျးကွညျပါဝငျထားတဲ့ MRTV-4 ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲဖွဈတဲ့ ဖဖေျောဝါရီလ(၁၃)ရကျနေ့ ည(၇)နာရီမှာ ပွသတော့မယျ့ “ဆူးပနျးခှသှေယျဘယကျနှငျ့ ပရှေကျလိပျနားတောငျးဆငျ” ဇာတျလမျးတှဲကွီးကို အားပေးကွညျ့ရှု့ဖို့အသငျ့ပဲလား????